Irshaad Maxamed | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa abwaan ka tirsan Afrikaan. Wuxuu wax ka qoraa hidaha iyo dhaqanka, hal abuurka, hadalka san iyo waliba wuxuu wax ka qoraa waayo aragnimada nolosha. Qoraaga wuxuu cilmi gaar ah u leeyahay hidaha iyo dhaqanka, waliba hal abuurka ku salaysan dhaqamada Soomaaliyeed. Qoraaga wuxuu soo maray dugsiga hoose iyo dhexe. Qoraaga waa qoraa aad u jecel dadka iyo dalka Soomalaiyeed.
Qofku markuu Facebook samaysanaayo magaca u horeeya wuxuu ku qortaa mid uu isaga ugaar ah. Tusaale ahaan, ‘midi’ wuxuu ku qoranayaa Mohamed, halka mid qale ku qoranaayo Mahamed, oo kukale ayaa isna ku qoranaya Muhamed, midkalana Mahamad. Hadda mayla socotaa xaraf xafbay isdheeryihiin ama laba hal waana uun halmagac? Kukale ayaa Hadana ku qoranaya Maxammad, halka uu ku kalena ku qortay Maxamad, na dhamayn karee midkalaa kusoo galaya Muxamad. Magacaas inta siyood ee uu baraha bulshadu ku xidhiidho ugu jiro lama soo koobi karo. Magacaas tusaalaha usoo qaadanay maa magac umada Islaamka ah iyo Illaahayba kuwayn waana Nabigeenii Muxamada Scw. …
Sababta igu kaliftay inaan gabaygaan curiyo ayaa ahayd. Muda hore ayaan dalkeena ka soo tagay, waxaana aaday qurbaha. Maalin maalmaha kamida ah ayaan sawirkayga Facebook soo dhigay waxaana igaran waayay dad badan oo ah kuwaanu wadankii wada joognay. Waxay idheheen “Irshaad miyaa adiga sawir kaani?” aniguna waxaan idhi “Haa, waa aniga waxayna dheheen “waad isbadashay oo wiil yar oo qurux badan adoo ah baad naga tagtay ee maxaa sidaan kuu galay wayn oo dhalan kaagii iyo midab kaagii sidaan u bedelay? Marka gabay yar oon kula hadlayaan ka sameeyay kaasoo sheegaya arinta sidaan iibedeshay inay tahay waayaha aduunka iyo …
Irshaad Maxamed, January 29, 2017
Soomaalidii horre aad bay gabdhuhu agtooda qiima wayn ugu lahaayeen colaada. Soomalidu isku laysana ka mid ahaan jirtay markii gabadh wax layeelo hadduusan si deg-deg ah waxa qoladaasi codsatay aan loo bixin. Waxaa dhici jiray dagaal rag badan lagu waayo waxaana markasta labixin jiray xaal. Waxaa la odhan jiray “iga ayaan badanaa ninka gashaanti adhi raacsaday” oo loola jeedo “gabadha saas uqiima badan miyaa adhi laraacinayaa, sowlagama yaabo in rag xoog badani dhabar garaacdaan?”. Wuxuuna ahaa dhaqan jiray oo ragga qaar ayaa haday gabadhaha arkaan kaxaysan jiray markay reerkooda geeyaana inta aabaheed u yeedhaan nooma heri odhan jiray taasoo aabuhu …
sheekadii waxay inoo maraysay maxaabiistii oo kala badh la toogtay Maxamad oo Cabdulaahi saaxiibkii ahaa ninkii fitanta kadan beeyayna ahaa oo isna lagu daray iyo Cabdulaahi oo maydkii ka dhexbaadhay xaaskiisa kadibna inta jeexay ka soo saaray wiil nool waana kii intuu qardhaas luqunta ugu xidhay naagtii gaadh haya ha ahayd wiil kii udhiibay ee ay la tagtay si qarsodi ah. Laakiin waa laga war helay ilmahaan in haweenay dhimatay ay dhashay waana lasoo doonay iyadoo la rabo inla’dilo ilmahaa si’uusan bari ugu aarin hooyadiis balse laakiin waxay codsatay gabadhii in loo daayo maadamaa ayna dhal lahayn oo ay iska korsato …
Sheekadii waxay inoo maraysay Maxamad oo xabsiga loota xaabay isaga iyo Cabdulaahi oo maxaabiis wada ahna waa kii hortooda lagu toogtay arintii gabadhii maxamad arinka ufa shiliyay ee uucaashaqay hadaba. Hebeen kii danbe waxaa badh tamaha maxaa biista lasootubay kuwii qirtay danbiyada ee lagu yidhi waan laydin siidayne qirta wax aydaan galin waxaa kujira dad kaas haween xaamilo ah oo ay kamid tahay haweenaydii Cabdullaahi haxaa isla markiiba labixiyay amar lawada maqlo oo aan lagu farxin kaasoo ah naxdin hal kii ugu dan baysay ficil kii xigayna wuxuu noqday furasho qori iyo koon garayn tiis, dhamaana waxaa lagu bil bilay rasaas isagoo …
Waxay sheekadii inoo maraysay maxamad oo ka war helay koox maxaabiistii kamid ah oo gooni looga madhay dadkii kale wuxuuna go aan saday bal inuu soo arko dadkaas. Isla markuu yimid ba wuxuu indhaha kudhuftay laba gabadh oo aad u qurux badan wuxuuna way diiyay idinku yaad ahaydeen mid ayaa ku jawaabtay anigu waxaan ahay gabadh xaamilo ah (uurle) oo reer keedi laga keenay gabadha na inay intaan umullayo (dhalayo) ila joogto waana walaashay oo ladhoho Fardowsa. Waxa uu mar kale su’aalay adiga magacaa? Waxay ugu jawaabtay Ayaan baa lay odhan jiray Laakiin maanta waxaan ahay Ayaan daran! Inta yar muru …
Waxay xay sheekadii inoo maraysay Cabdulaahi oo kujiray markii horaba jeelka oo reerkiisii miyiga yaalayna isla xabsiga loogu keenay:- ,,, Hadaba maxamad oo markii horaba soxiray cabdulaahi iyo reer kiisaba ahna qofka kaliya ee ficilkan kadan beeya maa daamoo wakh tigan masabid iyo far kufiiq ninrageed lagu yahay ayaa wuxuu maantana yiri hala qasho xolihii waxa kaloo geed askarta ag teeda ah ku bakhtiyay oo lafo lafo noqday aw-rkii ay wateen cabdullaahi iyo sedigii maantana waxaa fayl loogalay xooli hiisii waxaana laga dhigay dhawr cisho guda hood harag iyo hilib isagoo laqayb saday Cabdulaahi ciqaabtii wali waa ku soctaa ka ligiina maahee …
Dhaantada waa dhaqan soo jiraan ah, magaca horre ee dhaanto waxaa la oran jiray saarka oo markii dambana loo bixiyay dhaanto oo macnihiisa ah iyada ayaa dhaanto. Hadana Irshaad Maxamed Cumar oo ah qoraa ka dirsan Tukesomalism.com wuxuu soo diray qoraalkaan dhaantada ah. Bal aan aragno sidda uu u qoray iyo waxa ay ka hadlayso: Aragaagiyo nuurka Iftiinkaagiyo muuqa Ninku eegoo ku amaaninlawaaye Ma xura licintii aduun kaata hay ina deereey 《《《《☆》》》》 Idil yaa utagoo Agfadhiisto iska eegta Nafteey daa ogolaatee 《《《Halaleee》》》 Sidii roob unkadaayoo Aminkuu di i’laaiyo Ayaan tisii gugaadiyo Intuu joogo aroor Ma yay giisii la arkayoo Hilaa …
Wadaniyada waa shey muhiim u ah dhammaan bulshada ku nool daafaha caalamka. haddii aanan la helin isku doobni mideysan oo ka dhaxayso ummada Soomaaliyeed meel walbo oo ay dunidda ka joogto waxaa dhacay in si fudud loo dili karo bulshada Soomaaliyeed, waana sawabta maanta dhalinyaro Soomaaliyeed dil loogu xukumay iyadoo aanan waxbo laga weydiinin xukuumada markaas kajirto dalkeena. arrintaan iyo kuwa kale oo ku aadanaa badaha iyo dhulalka Soomaaliyeed waxaan ku wada macnayni karnaa kala qeybsanaanta bulshada iyo dhibaatada uu gaysto laaluush qaataha isku sheegayo siyaasi dadkiisa iyo dalkiisa daryeelaayo. Kumanaan iyo kumanaan Baa kujira kumananan Jeel oo kuyaala dunidee …
Sheekadii waxay inoo maraysay Oday Maxamuud oo ninkii libaaxa laga riday ahaa iyo Cabdulaahi oo reerkii odayga jooga iyo Maxamad oo saaxiibkii waa yay magaaladiina cidla kunoqotay ileen saaxiibkiibuu waa yaye. Hadaba Cabdulaahi oo Geed Reerka korkiisa ah fadhiya halkaana gogishu utaalo ileen waa ninreerka marti u ah. Wuxuu arkay goor Casara Gabadh aad uqurux badan oo Adhi wada oo Odaygu dhalay inta kacay Oo u tagay ayuuba sheekada ubilaabay. Waala isbartay haasaawa macaan oo midba midka kale ubogay baa la gushee kaystay. Intii la isku jeeday waxaaba lumay Arigii Gaba dhii inta meela ha wax ka yar fir fiirisay oo waxba waydaybay Udhawaaqday …